'Chikara Chinouya Pakati pehusiku': Kutaura Diki-Town Werewolves naDirector
musha	Horror Varaidzo Nhau	'Chikara Chinouya Pakati pehusiku': Kutaura Diki-Town Werewolves naDirector
by Brianna Spieldenner Dai 13, 2022
by Brianna Spieldenner Dai 13, 2022 1,570 maonero
Chikara Chinouya Pakati pehusiku ifirimu rinouya rinobatsira mhuri rewawolf kubva kuTampa, Fla. Firimu iri rinotevera mitambo yevechidiki vashanu mutaundi diki, vanosangana nemuparadzi ane mvere, akafanana IT or mweni Zvinhu.
iHorror yakawana mukana wekugara pasi nemutungamiriri pamwe nemunyori wefirimu, Christopher Jackson, kuti vataure werewolves uye kutora mafirimu akazvimirira. Jackson zvakare mumwe wevatungamiri veHorror-yakagadzirwa webhu nhepfenyuro Zvinotyisa Zvinyorwa, iyo Jackson anotaurawo nezveramangwana muhurukuro.
Director Christopher Jackson aine vatambi vefirimu rake, Kyle Oifer, Samantha O'Donnell, Michael McKeever, Madelyn Chimento naDylan Intriago.
Bri Spieldenner: Ndeipi chikamu chaunofarira kugadzira firimu rako idzva, Chikara Chinouya Pakati pehusiku?
Christopher Jackson: Zvakanaka, zvanga zvakanaka kuti tizobuda mumhando dzemafirimu mapfupi nefirimu remhando, isu taka (Vadivelu Comedy Cineview Studios) yanga ichivaka mukurumbira wedu sekambani inogadzira mafirimu kwemakore matanhatu apfuura. Uye zvino uyu wanga uri mukana wakanaka wekuti isu tipinde munyika yemafirimu. Ini ndinofunga kuti pamwe chikamu chandinofarira chaive kuwana mukana wekupedzisira kutambanudza makumbo edu pane imwe firimu kekutanga.
Asi kunze kweizvozvo, kushanda nevatambi vashanu vaitungamira kwaive kwakanaka. Vese vana vadiki, vese vaive neshungu dzekuve paseti, vese vaiwirirana chaizvo. Uye isu tinoisa yakawanda nguva nesimba mukuvaka kemikari yeakakanda pamwe chete kuti vanzwe vakanaka chaizvo. Vaitora gwara zvakanaka. Uye saka icho chaive chimwe chinhu kungovaona vakagadzika uye vachiwana nzvimbo dzavaive vaine nguva yakanaka, uye vachishanda nesimba panguva imwe chete. Zvakanga zvakanaka, zvakare.
BS: Makavawanepi vatambi ava?
CJ: Iyi bhaisikopo rakanga ratotambwa kare, iro chete basa randakanga ndaita raive mutevedzeri wemutambi, Madelyn Chimento saMary. Saka izvo zvainakidza zvakare, nekuti, sezvo ndakanga ndisina ruoko chairwo mukukandira, nekuda kwenguva yataive pasi, ndaida kuve nechokwadi chekuti vana vaive nenguva yakawanda pamwe chete kare. firimu rakatanga. Ini ndanga ndisingadi kukanda vatorwa paseti pamwe chete, nekuti yakanyanya chidimbu cheesemble. Uye saka ndaida kuvaka iyo camaraderie à la mweni Zvinhu, uko vana, vakaungana.
Saka ndaizoti, vhiki tisati tanyatsoenda kamera kumusoro, takapedza rinenge vhiki tichidzidzira pamwe chete. Uye yaingova ini nevana vashanu kweinenge svondo. Uye taitamba mitambo. Chimwe chinhu chinonakidza vazhinji vevana ava, iyi yaive nguva yavo yekutanga pahwindo. Uye ndakanga ndashanda naMadelyn Chimento pafirimu pfupi zvichida mavhiki mana kana mashanu ndisati ndaunzwa kuchirongwa. Uye saka iye neni taitova nehukama hwakanaka hwekushanda. Rehearsals for that was a lot of fun, because it was a lot of theatre games, kugadzirira komedhi yaiva mberi kwedu. Taida kuputsa makwati toita sekuzivana. Uye ndizvo zvatakaita.
BS: Zvikuru. Ehe, zvinotonhorera kuti iwe wakawana nguva yekuvaka hukama ihwohwo nevatambi.
CJ: Pakanga pasina scenario yekuti vaisazodzidzira. Uye pane imwe nguva, taizongova nezuva rimwe chete rekudzidzira. Uye kwandiri zvakanga zvisingagamuchirwi. Saka isu takazvivaka mufomati yedu, mune yedu pre-kugadzirwa kuti tive nevhiki yakazara yekudzokorora tisati tapindamo.
Uye vaiva mazuva akareba, vaishanda nesimba chaizvo. Nekuti ivo vaizove vachitamba kubva kune veterans vakaita saEric Roberts, naMichael Paré naJoe Castro, ava maveterans emafirimu. Uye pane yedu mutsara wenguva, nekuti mutsara wenguva waipenga pakugadzira pachayo. Isu takanga tisina nguva yekukwira pane seti uye kuita senge, zvakanaka, tichaitei? Isu taiziva kuenda mune izvo zviratidziro, kuti taizozvizadzisa sei zvine hunyanzvi kubva pakuona kwekuita, nekuti takanga tatozvidzokorora kwevhiki.
BS: Unganyatso kutsanangura sei Chikara Chinouya Pakati pehusiku?
CJ: Ndingati ndezveboka revachiri kuyaruka vanoona kuti werewolf iri muguta ravo diki reFlorida. Iyo komedhi ine zvinhu zvinotyisa, nekuti iyo firimu pachayo pandakawana iyo yekutanga script, uye ini ndakapinda mune yakanyorwazve, ndaida firimu rinotyisa iro mhuri dzaigona kuona pamwechete, ndaida kuti vana nevechiri kuyaruka nevakuru vese vagone. farira firimu iri. Uye saka ndingati ikomedhi ine zvimwe zvinotyisa zvinhu mairi.
BS: Uye akanga Chikara Chinouya Pakati pehusiku firimu rako rekutanga semutungamiriri?
CJ: Aiwa, ndakanga ndine firimu rimwechete rinenge makore gumi nemaviri apfuura iro risingafi rakaona chiedza chezuva. Uye kwakanga kwakafanana norubhapatidzo rwomufirimu womoto. Saka, ndakanga ndichangopedza basa rangu guru rekutanga semutambi. Uye ndakati, ndinoda kuita mafirimu pane kuva mufirimu. Uye saka ndakaita senge, ndiri kungosvetukira mukati ndogadzira firimu rekuita. Kukanganisa kukuru. Handikwanise kukurudzira vanhu zvakakwana kuti vasadaro, tanga nefirimu pfupi, tanga neminiti gumi kana maminitsi makumi matatu uye usasvetukira mufirimu rekuita. Saka mushure meizvozvo, ndaida kuramba ndichikwenenzvera basa rangu semutungamiriri. Uye mumakore gumi nemaviri apfuura, ndakaita boka remafirimu mapfupi. Semutungamiriri uye munyori, ndakatungamira toni yezvishambadziro. Yakanga yangova nguva yandakanzwa ndakasununguka zvakakwana muunyanzvi hwangu hwakagadzirirwa kutora izvi semunyori uye mutungamiriri.
BS: Iwe wakanyora Chikara Chinouya Pakati pehusiku naizvo?
CJ: Ed McKeever, mumwe wevagadziri vakuru, aive musiki wekutanga wenyaya. Akanditumira script. Mushure mekutaura naEd naTodd Oifer, anova mumwe mugadziri mukuru, ndakavanyengetedza kuti vandisiye nditore zvikamu zvakanakisa zvepfungwa yekutanga yaEd uye ndigadzire nyaya yandaiziva kuti tinogona kuita mafirimu mumavhiki matatu, nekuti ndizvo chete zvataive nazvo, mavhiki matatu. , uye kwaive kupenga, ndaigona kutaura kwemaawa nezvekupenga kwemaitiro emufirimu, nekuti ndinovimbisa kuti zvaive zvakaita Robert Rodriguez, munoziva, mupanduki asina chimiro chevashandi, kwaive kumhanya kunopenga. Saka ndakavaka script nenzira yandaiziva kuti ndaida kutungamira nekuti ini handisi mukuru anotyisa director. Kunyangwe ini ndakaita akawanda anotyisa mafirimu. Ndinofarira kuseka vanhu uye ndinoda kuita kuti vanhu vafunge uye saka uyu wanga uri mukana wakanaka wekuita izvozvo, kuseka vanhu. Ndakagadzira comedic horror script padivi paJason Henne, aive mumwe wangu munyori. Ndakanyora vhezheni yechinyorwa chave kupfurwa.
Kwaitonhorera chaiko. Nekuti kazhinji kacho ivo vanongoregera pamatomu uye voita kuti ndiende, kashoma kuita izvozvo. Uye kuti ndiwane izvo kunyanya munyika yakazvimirira yemafirimu, ndinoona zvichinyanya kuoma kuve nemukana wekungova muimbi uye kuenda kugadzira, uye ndizvo zvandakapihwa naTodd naEd, saka zvainakidza chaizvo.
BS: Ehe, izvo zvakanaka chaizvo. Ndinofara kuti wakakwanisa kuita chaizvo Chikara Chinouya Pakati pehusiku firimu rako pachako. Iwe unofunga kuti uchaita zvimwe zvinotyisa ipapo?
CJ: Munoziva, handipikisane nazvo. Handisi kuzove mukomana anoita firimu re slasher senge Halloween kana kufanana nemhando yeFreddy Krueger. Kunze kwekunge paine chinhu chinondifadza pazviri. Sezvandataura, ndinoda kusekesa vanhu. Uye ini ndinoda kuita kuti vanhu vafunge, aya ndiwo maviri andinoda emhando dzemhando dzekushanda. Uye saka ndinofunga muchaona kuti mushure mekuputira izvi naJoe Castro, uyo akaita zvese zvakakosha mhedzisiro uye akaridza werewolf yedu, akatanga kukava. kutenderedza iyi yakanaka kwazvo comedic horror pfungwa yandaida chaizvo. Tiri kuita basa nazvo. Asi hazvina kuiswa padombo. Saka handingati handisi kuzomboita horror futi. Ini naDominic Smith tiri kuronga kudzosa Zvinotyisa Zvinyorwa, inova rudzi rwekutyisa kwakachena.
BS: Gotcha. Uye Zvinotyisa Zvinyorwa ndeye dandemutande, handiti?
CJ: Rudyi. Saka Zvinotyisa Zvinyorwa zvakaitwa neni naDominic Smith. Uye iHorror yakanyatso tsigira mwaka wekutanga. Uye saka tariro yedu ndeye, nekuti isu takave nezvikamu zviviri zvemwaka wechipiri zvakapfura, zvapera. Asi denda rakarova. Uye saka izvo zvakamisa zvese. Tave kutodzokera kunguva yekuti, zvakanaka, ngatipedzei mwaka wechipiri toona zvinoitika. Nekuti mwaka wekutanga wakanyatsoita zvakanaka. Saka, zvingave zvinonakidza kuona zvinoita mwaka wechipiri ikozvino isu tashandura fomati zvishoma.
BS: Zvakanakisa. Zvakanaka kunzwa kuti wava kudzokera mazviri. Saka ndezvipi zvinotyisa zvinofurira Chikara Chinouya Pakati pehusiku?
CJ: Kana zvasvika kune chaidzo dzinotyisa, ndaiona bhaisikopo remawolf randaikwanisa kuwana maoko angu, ndaipedza mazuva nemazuva ndichiona mafirimu emawolf, kuti ndiwane pateni yandaifarira. Asi ini ndinofunga kuti chakanyanya kundifurira firimu iri aive asiri anotyisa mafirimu. Chakanyanya kundifurira nefirimu iri, zvinhu zvakaita Iwo maGooni or mweni Zvinhu kana kutosvika kure Teen Wolf, iyo comedic chimiro, Teen Wolf harisi bhaisikopo rinotyisa, rine nguva shoma shoma inotyisa mukati maro. Uye ini ndakaita senge, uku ndiko kwandinoda kugara.
Uye saka kutarisa kwangu kwanga kusiri pane werewolf sezvazvaive pakuvaka nyika iyo vana ava vari kugara pamwechete, iyi ensemble yekunzwa yavaive nayo pamwechete. Uye ndinofunga kuti ndizvo zvinoita kuti zvive zvinosetsa ndezvekuti vana vari kudyidzana nguva yese. Uye werewolf inogara iripo. Asi haasiriye pfungwa yedu huru, munoziva?
BS: Panyaya iyoyo, wanga uri sei chiitiko chako chekupfura chisikwa chinoratidza firimu? Chaive chimwe chinhu chawakaona chakakuomera kushanda nacho here? The werewolf pachayo?
CJ: Ehe, ndingati izvi zvakanyanya kunetsa, chete nekuti werewolf yakanga yatogadzirwa uye yakagadzirwa panguva yandakapinda. Uye sechinhu chaicho, ndinorangarira pandakapinda muchikepe, vakanga vangogadzira maoko chete nemusoro wewarewolf. Pakanga pasisina muviri zvachose. Uye saka ndakaita senge, kwete, kwete, isu tinofanirwa kuve nemuviri. Saka takasika muviri. Asi zvainakidza kushanda newarewolf, nekuti kana iwe usina chaiyo yekugadzira yekugadzira pane chisikwa, usati waunzwa mubhodhi, iwe unofanirwa kuenda, zvakanaka, zvakanaka, tingashandisa sei chisikwa ichi nepandinogona napo semutungamiriri. Uye saka ndinofunga kuti ndizvo zvatakaita.
Isu takaita rombo rakanaka rekuita kuti Joe Castro abhururuke kubva kuCalifornia kuti agadzirire kuve werewolf yedu. Nekuti akange asina kurongerwa kuve werewolf. Ndakamunyengerera parunhare rimwe zuva, ndakafanana naJoe, ndinoda kuti uvewolf yedu mufirimu iri. Uye Joe anoenda, ini handizive, ndingangofanira kusazviita. Nekuti ini ndinoda kukwanisa kuona mhedzisiro iri kuitika uye zvese izvi zvinhu. Uye ndakati, Joe, ndichakutsvagira chero munhu waunoda kuona iyo skrini paunenge uchiita. Ndinoda kuti uve mhungu yangu, iwe unenge wakakwana pazviri. Iye ndokuti hongu. Zvinova rombo rakanaka kuti tive naye ikoko.
Asi ndaizotaura kuti kushanda neiyi werewolf, ndaifanira kutsvaga nzira inoenderana nemaitiro angu ekugadzira mafirimu. Uye saka ndinofunga kuti takaita izvozvo, ndinofunga tinopa ruremekedzo rwakanaka kumafirimu anotyisa anotyisa munenge muna 1980, uko kunonakidza kuona chisikwa nekuti chisikwa, senge zvakanaka, tinochiwana. Tese tiri mune izvi pamwe chete. Uye ndizvo zvatakaita. Ndinoreva, idzo mhando dzezvisikwa kana iwe uri munhu wechikuru aida mafirimu anotyisa, mafirimu ezvisikwa. Kana iwe ukadzokera uye uchiona iwo mafirimu nhasi, iwe uri mune joke. Hazvichakutyidzi nekuti tafambira mberi zvakanyanya tekinoroji nemaitiro ezvisikwa, handiti? Sekuti isu tinokwanisa kugadzira mawolf chaiwo. Izvi hazvisi izvo, iyi inotyisa kwazvo kutarisa werewolf asi isu tese tiri mune chokwadi chekuti ichi chisikwa, chinova chinonakidza kune vateereri.
Joe Castro, werewolf, naChristopher Jackson vachidya popsicles pabest yeThe Beast Comes with Midnight
BS: Ehe, chokwadi. Saka iwe ungati chii chaunofarira werewolf movie? Kunze kwe Chikara Chinouya Pakati pehusiku Ehe saizvozvo.
CJ: Iwe unoziva, isu takave negakava iri pamusoro peiyo yakanakisa werewolf bhaisikopo, uye munhu wese aive neavo ekutora, vanhu vazhinji vakati. Silver Bullet. Vanhu vazhinji vakati Kuungudza, ndinofanira kutaura, kubva mukutsvakurudza kwangu kwose, ndakanakidzwa chaizvo VaAmerican Werewolf muLondon. Uye chikonzero nei ndaichida zvakanyanya ndecheiyo shanduko chiitiko chinoitika mufurati. Ndinoreva, shanduko inoshamisa, uye yaityisa. Yakanga iri gory uye yakashata uye pamberi penguva yayo, mumaonero angu. Saka dai ndaifanira, pfuti kumusoro, pamwe An American Werewolf muLondon.
BS: Hongu, ndiyo mhinduro yakanaka. Pamwe ndingabvumirana newe. Ndinoda shanduko iyoyo.
CJ: Chimwe chinhu chinotonhorera nezvefirimu rangu ndechekuti 95% yefirimu iyi yakapfurwa muTampa, Florida. Uye izvozvo zvaiva nechinangwa. Takawana nzvimbo inoshamisa kwazvo paShowmen's Museum muGibsonton. Isu takashandisa iyo nzvimbo kubva kumusoro kusvika pasi. Zvaishamisa. Uye ndinofunga kuti, semumwe munhu anozvirumbidza semugadziri wemufirimu weFlorida, kuti tikwanise kuratidza kuti inotyisa sei nzvimbo yatinofanira kukwanisa kupfura 95% yayo pano muTampa, muHillsborough County, kunyanya. Kwaingova kunzwa kwakanaka chaizvo kuzvarwa nekurerwa pano. Zvaive zvakanaka kukwanisa kuratidza nzvimbo zhinji dzisingatarisirwe nevanhu vazhinji.
Iyo Showmen's Museum muGibsonton, Florida
BS: Iwe unofunga kuti Florida inzvimbo yakanaka yekutyisa?
CJ: Ini ndinofunga Florida inzvimbo yakanaka kune chaiyo chero mhando. Ndapfura dzinenge nzvimbo huru dzese muFlorida, ndakafamba ndichipinda muEverglades kupfura, ndaenda kumaguta makuru muno muFlorida kunopfura. Ndakafamba njanji ndichiita zvekupfura. Uye zvinoshamisa izvo zvaunowana muFlorida izvo vanhu vazhinji vasingazive nezvazvo. Uye ini ndinodada nekuziva nzvimbo idzodzo uye nekugona kuzviita. Yangu inotevera ficha firimu ichave pano muFlorida. Apa ndipo patinoda kuva.
BS: Zvikuru. Zvakanaka, ndinotenda iwe uchitora nguva yekuita hurukuro iyi neni nhasi. Ndinofunga kuti zvakanga zvakanaka. Ko firimu rine zuva rekuburitswa here?
CJ: Ini ndinofunga zhizha ra2022 ndiro chairo pazvichaitwa.
Tarisa uone trailer ye Chikara Chinouya Pakati pehusiku pazasi.